Defamation — အသရေဖျက်မှု – Free Expression Myanmar
Defamation should contain four elements. In order to be defamatory,astatement must:
be ofafactual nature;
cause damage; and
this damage must be to the reputation of the person concerned, which in turn means that the statement in question must have been read, heard.
Remedies should include:
Court order to issue an apology or correction
Court order to publish the judgment finding the statements to be defamatory
All public figures must accept greater degree of criticism than general public.
Governments, government bodies, including police and public prosecutors should take no part in initiation or prosecution.
Prison, suspended prison sentences, cancellation of licences, excessive fines should never be available.
ဤအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွင် အချက်လေးချက်ပါဝင်သည်။ အသရေဖျက်မှုတစ်ခု ဖြစ်စေရန် ဖော်ပြချက်သည်
ဖြစ်ရပ်မှန် ပေါ်တွင် အခြေပြုထားသော သဘာဝဖြစ်ရမည်၊
ယင်းထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းသည် လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ဂုဏ်သိက္ခာနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိရမည်။ အပြန်အလှန်အဓိပ္ပါယ်မှာ မေးခွန်းပါ ဖော်ပြချက်အား ဖတ်ဖူး၊ ကြားဖူးပြီး ဖြစ်ရမည်။
ခုခံကာကွယ်ခြင်း တွင် -
ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် တားမြစ် ကန့်သတ်ချက်မပါသော ထင်မြင်ယူဆခြင်းကို လက်ကိုင် ကျင့်သုံးခွင့်၊
တောင်းပန်ရန်သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် တရားရုံးမှ အမိန့်ချခြင်း
ရေးသား ပြောဆိုချက်သည် အသရေဖျက်မှု မြောက်ကြောင်းတရားရုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထုတ်ဝေခြင်း
နိုင်ငံပုံရိပ်များအားလုံးသည် အထွေထွေသောလူပုဂ္ဂိုလ်များထက် ပိုမိုမြင့်မားသော ဝေဖန်မှုဒီဂရီ ကို လက်ခံရမည်ဖြစ်သည်။
အသရေဖျက်ခြင်းခံရသည်ဟု တိုင်တန်းသူ သို့မဟုတ် သူမသည် အကြီးတန်းအစိုးရ အရာရှိဖြစ် နေစေကာမူ ယင်း၏ အဆင့်အတန်းကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပဲ ရဲ နှင့်တရားလို အကျိုးဆောင်များအပါအဝင် လူထုအာဏာပိုင်များသည် ပြစ်မှုဆိုင်ရာအသရေဖျက် မှုဖြင့် စွဲဆိုသောအမှုများတွင် ပါ၀င်ခြင်းမပြုရ။
ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း၊ ဆိုင်းငံ့ ထောင်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်း၊ လိုင်စင်များသိမ်းခြင်း၊ လွန်ကဲသော ငွေဒဏ် ချမှတ်ခြင်းနှင့် အခြားပြင်းထန်သော ပြစ်ဒဏ် ချမှတ် ခြင်း မည်သည့်အခါမျှမပြုရ ။
Defamation in Myanmar law
Penal Code Art. 499-502 ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ ၄၉၉- ၅၀၂
Telecommunications Law Art. 66(d) ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ ၆၆ ဃ
Tagged with: 66(d) ၆၆(ဃ), Defamation အသရေဖျက်မှု, Penal code ရာဇသတ်ကြီး ပုဒ်မ, Telecommunications Law ဆက်သွယ်ရေးပုဒ်မ